Ciidamada AMISOM oo dad Shacab ah ku dilay Muqdisho - Awdinle Online
Ciidamada AMISOM oo dad Shacab ah ku dilay Muqdisho
Kolonyo kamid kamid ah Gaadiid ay leeyihiin Ciidamo ka tirsan AMISOM ayaa Mooto Bajaaj waxaa uu ku jiireen Isgoyska Howl-wadaag ee Gobolka Banaadir, waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Qof ku sugnaa Isgoyska Howl-Wadaag ayaa sheegay in laba Haween ah oo saarnaa Mooto Bajaajta ay geeriyoodeen halka wadihii Mooto uu soo gaaray dhaawac culus, kaas oo loo qaaday mid kamid ah Isbitaallada ku yaal Muqdisho.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Ciidamada Booliska ee ku sugan Isgoyska Howl-wadaag ay isku dayeen inay celiyan Gaadiidka AMISOM ee dhibatada geystay balse ay si awood ah u baxsadeen.
Dhowr jeer ayaa Gaadiidka Ciidamada Amisom waxaa ay sibareer ah wadooyinka Muqdisho ugu jiireen gaadiid ay wateen dad Shacabka, waxaana weli jirin askar loo qabtay ama loo Maxkamadeeyay.
Previous articleShir u furmaya Madaxda Dowladda & Dowlad Goboleedyada & qodobo ku gadaaman
Next articleTaliska Ciidanka xoogga dalka oo guulo ka sheegtay dagaalka Shabeellaha Hoose